I-Ellicott Dredge Sandpiper kaDuPont, isifundo se-Electric Dredge Case
I-Special Mining Dredge - "iSandpiper"
Kwangathi 24, 2012
Umnikazi - I-EI DuPont de Nemours & Co., EU.SA
Usayizi we-Hull - ubude ngezinyawo 165 '
Ubunzulu Obukhulu Bokumba 50 '
Ukudonsa Usayizi Wepayipi - ID 23 "
Ukukhishwa Usayizi wePayipi - ID 23 "
I-Dredge Pump Horsepower 4800
Isisulu sehhashi 1450
Ingqikithi efakiwe I-Horsepower 4800
INFORMATION PROJECT: IDuPont, okuyinkampani ehamba phambili yamakhemikhali yase-US futhi engumkhiqizi omkhulu kunayo yonke emhlabeni we-titanium dioxide (TiO2), isanda kuqeda iphrojekthi eyizigidi eziningi yokwandisa imisebenzi yayo yezimayini eFlorida ngokuvula indawo entsha ngaseMaxville. Ellicott entsha® i-brand dredge kanye nesitshalo se-concentrator esihambisanayo sikhulise umkhiqizo ngama-50% futhi sizokwelula impilo yezimayini iye onyakeni ka-2010. I-dredge pumps iye esitshalweni sokugxila ezintantayo esihlukanisa i-TiO2 neminye imikhiqizo evela kwamanye amaminerali esihlabathini. Lesi sitshalo bese sipompa isikhunta esitokisini ogwini bese sibuyisela isihlabathi endaweni eyayakhiwe ngaphambili. Uhlelo lwezemvelo olwenziwe ngokucophelela luqinisekisa ukuthi indawo ekhishiwe ibuyiselwe ngangokunokwenzeka esimweni sayo sangaphambili. Elinye lamadolobha amabili amadala asanda kusebenza eduzane nediphozithi yeTrail Ridge selivaliwe ngokohlelo. I-dredge entsha "SANDPIPER" ikhiqiza womabili ama-dredges wangaphambilini ahlanganisiwe.
I- "SANDPIPER" ithole ukukhiqizwa kwayo kwamathani ayi-2,100 ngehora ngenyanga yayo yokuqala yokusebenza. IDuPont manje isihlela ukwandisa umkhiqizo ngaphezulu kwe-40% kuye ku-3000 TPH. Ngokuguqulwa okumbalwa, i- "SANDPIPER" yakhiwe kahle ngokwanele ukwamukela ukwanda okukhulu.
Ukulungiswa kwezimayini ezinkulu kakhulu kwe-TiO2 eMelika.